မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: ကိုရီးယားခရီးစဉ် Day 2
Posted by mabaydar at 2:41 AM
မဗေဒါ ပြောသလိုပဲ ဗီဒီယိုကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အားမနာတမ်းကို ထောက်ခံပါတယ်။ ဘာလဲဆိုတော့ ဗီဒီယိုကို ဒီတစ်ခါ ပိုပြီး အားမရဖြစ်မိတယ်။ ဗီဒီယိုမှာ ဇာတ်ကွက်တွေက အဆက်အဆက်မရှိသလို တော်တော်လေးကိုလည်း ခါနေပါတယ်။ ကြည့်ရတာ စစချင်းက မူးချင်သလို ဖြစ်နေမိပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်မလုပ်တတ်တာကို လုပ်နိုင်နေတာကိုပဲ အားကျမိပါတယ်။ လုပ်ရင်းလုပ်ရင်းနဲ့ ကောင်းလာတော့မယ်လိုယုံပါတယ်။ နောင်ဆို ဒါရိုက်တာတွေဘာတွေ တောင်လုပ်လို့ရနိုင်တယ်။ ကြိုးစား !!! :) အားပေးလျက်
8/30/2009 5:52 AM
တချို့ကဆန်းကြယ်တယ်။ မြန်မာနဲ့မလေးလောက်ပဲ သွားစရာရှိတယ်ထင်ကြတယ်
ကိုရှေးစာဆို ခုလိုဝေဖန်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်... မဗေဒါ ဗွီဒီယိုထဲမှာ အားမရဘူးဆိုတာက ပထမသီချင်းမှာ တီးလုံးမြန်တာနဲ့အမျှကိုက ဇာတ်ကွက်တွေကို လိုက်မြန်မြန်တည်းဖြတ်ဖို့အတွက် မလုပ်နိုင်တာကိုပါ... အရမ်းစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ရနိုင်စရာရှိပါတယ်... ဒါမှမဟုတ် တည်းဖြတ်ပညာကို ကျွမ်းကျင်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဆော့ဝဲလ်အကောင်းစားကို သုံးတတ်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် အဆင်ပြေပါတယ်...
ဗွီဒီယို အဆက်ဆက်မရှိဘူးပြောတာတော့ သိပ်နားမလည်ပါဘူး... အဲဒါကို အသေးစိတ်ပြောပြစေချင်ပါတယ်... အဲဒိတနေ့တာသွားတာကို တစ်ခုပြီးတစ်ခုရိုက်ထားတာပါပဲ... သွားထားတဲ့အတိုင်း အစဉ်လိုက်တည်းဖြတ်ထားတာပါပဲ... ဒါပေမဲ့ ပထမဗွီဒီယိုလို စကားပြောသိပ်မပါတာက ပြောဖို့အဆင်မပြေလို့ ပြောကိုမပြောဖြစ်တာပါ.. ဒီတော့ တည်းဖြတ်စရာလဲမရှိပါဘူး...
ကင်မရာခါရတဲ့အကြောင်းရင်းကလဲ Tour နဲ့သွားရတာကိုပဲ အပြစ်ပြောရမလားမသိတော့ပါဘူး... ဂျပန်ခရီးစဉ်တုန်းက ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်သွားတော့ တစ်နေရာရောက်ရင် စတန်းထောင်ပြီး လုပ်ချင်တိုင်းလုပ်ဖို့ အချိန်ရပါတယ်... ပြီးတော့ ဂျပန်က လူလဲရှင်းတယ်... ခု ကိုရီးယားခရီးစဉ်က တိုးနဲ့သွားရတော့ အချိန်မရပါဘူး... အားလုံး အမြန် အမြန်လုပ်ရပါတယ်... ရတဲ့အချိန်မှာ ရိုက်ရတော့ လက်ကတုန်ပါတယ်... ထိုင်ပြီးအေးဆေးရိုက်နေဖို့ အချိန်မရပါဘူး... ပြေးပြေးလွှားလွှား သွားသွားလာလာရိုက်ရပါတယ်... အဲဒါကြောင့်ကင်မရာခါတာပါ... အဲလိုဖြစ်နေတာကိုလဲ မဗေဒါကိုယ်တိုင်လဲသိပါတယ်... မဗေဒါကိုယ်တိုင် Raw Video ကိုကြည့်ပြီးတည်းဖြတ်တိုင်း ခေါင်းမူးပြီး အိပ်ပျော်ပျော်သွားလို့ ဗွီဒီယိုက ဒီလောက်ကြာနေတာပါ...
အပြုသဘောနဲ့ အကြံဥာဏ်ပေးတဲ့အတွက် လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်... အပေါ်ကရေးခဲ့တာတွေကတော့ မဗေဒါရဲ့ မတတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ လျှောက်ထားချက်လေးတွေပါ... သဘောပေါက်နားလည်မယ်ထင်ပါတယ်... တကယ်လို့သာ အချိန်ယူ ကြိုတင်စီစဉ် အကျအန လုပ်ပိုင်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲ ဘယ်လောက်အထိကောင်းအောင် ကိုယ်လုပ်နိုင်မလဲဆိုတာကို မဗေဒါကိုယ်တိုင်လဲ သိချင်နေပါတယ်... တစ်ချိန်တစ်နေ့ အခြေအနေပေးရင်တော့ လုပ်ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်...
Steve Evergreen ရေ... ၀ါသနာတူတယ်ဆိုတော့ နောက်ဆို အဖော်ညှိလိုက်လေ.. ဟား.. ဟား
တချို့တွေက မြန်မာနဲ့မလေးသွားတယ်ဆိုတာလဲ Budget ရော အားလပ်ချိန်ရော မရကြလို့ဖြစ်မှာပါ... အခွင့်သာရင်တော့ အားလုံး သွားချင်ကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်... လာဖတ်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါနော်...
8/30/2009 6:21 AM
မဗေဒါ နောက်တခါဆို camera အတွက် tripod နဲ့ Remote shutter ပါယူသွားနော် ကိုယ်ဘာကို ရိုက်ရ တာ အဆင်ပြေတာပေါ့ video clip ရဲ့ နောက်ခံ music တွေမိုက်ပ. boot ကြီး လဲမိုက်တယ် video တွေရိုက်လာပြီးပြန်တင်ပေးတာ ကျေးဇူးပါ make-up မပါတဲ့ ကိုရီယားမ တွေမရိုက်လာဘူးလား. သူတို့ က make-up မပါ၇င် မမိုက်တော့ဘူး
tripod က မေ့ကျန်ခဲ့လို့ပါ... ဒါပေမဲ့ tripod ပါလာရင်လဲ အဲဒါနဲ့ ထောင်ရိုက်နေဖို့ အချိန်မရပါဘူး... လူတွေက သိပ်ရှုပ်ပြီး... tour အဖွဲ့ဆိုတာက အချိန်နဲ့ သွားနေရတော့... အဲဒါအတွက် အချိန်မရလို့ပါ... ဒီလောက်ဆို မဗေဒါရဲ့ အခြေအနေကို နားလည်မယ်ထင်ပါတယ်...
မဗေဒါက ချစ်စ၇ာလေးပါလား... ၀လို့လှလို့...တစ်ခုပဲ၇ှိတယ်..ဘာကြောင့် အဲလောက် အသားမည်း၇တာလဲ. အသားဖြူ၇င်တော့ ကိုး၇ီးယား မင်းသမီး ထိုင်ငို၇မယ်...ဟီးဟီး
ကျွန်တော့်ဆီမှာ လာဖိတ်ထားတာ အစက မသိဘူးဗျ။ မဗေဒါ အသစ်တင်တာတွေ့လို့ လာဖတ်ရင်း မှတ်ချက်ပေးခဲ့တာ။ မဗေဒါ လာဖိတ်ထားတာကို နောက်မှ သိရတာ။ ပေးတုန်းကလည်း ကိုယ်ဆိုလိုတာကို နားလည်ပါ့မလားဆိုပြီး စိတ်ထဲမှာထင့်ထင့် ထင့်ထင့်တော့အဖြစ်သား။ (ပြောချင်တာက မကြိုက်မှာကိုပါ)
အဲ့ဒီတုန်းက ပြောခဲ့တာပေါ့နော်။ ဥပမာ- ပထမပိုင်း မနက်စာ စားရာမှာ ဘူဖေးအကြောင်းပြောတယ်ပေါ့ ဒါပေမယ့် ဘူဖေးဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့ မမြင်ရဘူး။ အမှန်က ဘူဖေးကို ရိုက်ပြပြီး ဘာကဘာလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာ ပြောရင် ပိုပြီး သဘောပေါက်နိုင်တာမျိုး။ ဒါကလည်း မဗေဒါ စားတုန်းရိုက်ရတာဆိုတော့ အခက်အခဲ လွဲချော်မှုတွေ အများကြီးရှိနိုင်မှာပါ။ ကျွန်တော်က ဘယ်လိုလေးဆိုရင် ပိုပြီး သဘောကျမိတဲ့ဖက်ကို ပြောပြတာမျိူးနော်။ ရိုက်ချက်တွေမှာလည်း အစပိုင်းပဲတော်တော်ခါတာမျိုးပါ။ နောက်ပိုင်းက အဆင်ပြေပါတယ်။
နေ့လည်စာ စားတဲ့အပိုင်းကို မြင်တော့ ဗီဒီယိုအဖွဲ့သားတွေ ပျော်ပျော်ပါးပါး စားသလိုမျိုး မြင်မိပါတယ်။ On Air ကားထဲကလိုမျိုးပေါ့။
နေ့လည်စာ စားပြီးတော့ ရပ်ထားတယ်။ နောက်တစ်နေ့ကို မျှော်တဲ့ ခရီးစဉ်က တစ်နေ့တာပြီးသွားလို့လား မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်။ အဆက်ဆက်က အားလုံးချုံရင်ရှိပါတယ်။
တစ်ချို့နေရာတွေဆိုရင် သဘာဝကျကျ ရိုက်ပြထားတာမျိူးလေးတွေကို တွေ့ရပါတယ်။ ဥပမာ- လမ်းတစ်ခုကို လျှောက်လာပြီဆိုရင် ကင်မရာသမားက ရှေ့ကနေ ကြိုရောက်ပြီး ရိုက်ပြထားတာမျိုး။ နောက် ပြန်တော့မယ်ဆိုရင်လည်း ကင်မရာသမားက အရင်ဆုံးကားပေါ်တက်စောင့်ပြီး ဇာတ်ရုပ်အလာကို ကားပေါ်ကနေ စောင့်ပြီး ရိုက်ပြသွားတာမျိုးတွေပေါ့။
တစ်ချို့နေရာတွေမှာကျတော့ ခိုတာလားဘာလားတော့မသိဘူး :) အကွက်ပြောင်းတာတော်တော်မြန်သွားတာမျိုးတွေ တွေ့ရတော့ တစ်ချက်တစ်ချက် ဆက်ဆက်မရသလို ဖြစ်ဖြစ်သွားတာမျိုးကို ပြောချင်တာပါ။
ကျွန်တော်က အနုပညာအကြောင်းမသိပါဘူး။ ပရိသတ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဆန္ဒကလေးကို ပြောပြတာမျိုးပါ။ နောက်လာမဲ့ အပိုင်းတွေမှာ ပိုပြီး အဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်လျက်။
ဗွေမယူဘူး မြန်မြန်တော့ တင် ဟွန်းးးးးးး
စတာအမရေး) အပိုင်းတွေ စောင့်နေပါ့မယ်
ရှုခင်းတွေက လှလိုက်တာနော်.. အမနဲ့ အတူ အွန်စောအိမ်လေးကို ရောက်လို့ ဆလပ်ရွက်နဲ့နေ့လည်စာ စားသွားတယ် ဂလု :D
Editing ပိုကောင်းလာတယ်။ တီဗွီမှာ ကြည့်ရတဲ့ ခရီးသွား documentary တွေလိုပဲ။
အင်း သွားချင်လိုက်တာနော် အဲ့လို ...
9/08/2009 1:01 AM
ဘူးဖေးဆိုပေမယ့် ချဉ်ဖတ်တွေက များပါတယ် ကြက်ဥကြော်ရယ် ဝက်သားရယ်ပဲ စားလို့ရတယ် ချဉ်ဖတ်က မုန်လာဥဖြူချဉ်ဖတ်လေးတော့ ကြိုက်တယ်”
ဒီဘလော့ကို ရောက်တိုင်း အဲ့ဒီနေရာလေးကို ပြန်ပြန်ကြည့်မိတယ်.. ကြိုက်လို့.. တမျိုးလေးပဲ.. :P
အဲလိုမျိုး နေရာအနှံ့ လျှောက်သွားချင်တယ် ..း)
ခုတော့ပုံပဲကြည့်သွားတော့မယ် .. :D